Fikarohana momba ny firaisana Fiverenan'ny fihaviana na ny fiainana an-dàlambe, ny roa tonta na ny roa tonta ara-panahy an'i Yuvraj Kapadia | Walter Semkiw sy ny famerenana amin'ny fiainana an-taonany any India - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Tamin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Kevin Ryerson, i Yuvraj Kapadia dia fantatra amin'ny maha ahy ahy, izay midika fa ny Yuvraj sy izaho dia avy amin'ny fanahy iray ihany. Ny teny hafa manasaraka ny fampodiana dia ahitana lelafo roa, fanahy osa na fiainam-paritra. Afaka mianatra bebe kokoa momba io tranga io ny: Ny fihenam-bidy
Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia Manohana ny Fahatongavana ho nofo nofo nofo
Satria tantara mahafinaritra ity, avelao aho hizara ny fomba namantarana an'i Yuvraj ahy. Ao amin'ny 2003, ireo raharaha momba ny harena ankibon'ny tany misy ny Penny Peirce, izay mampiseho amin'ny fomba mampihoron-koditra ny fisehoan-javatra momba ny fisarahana, dia navoaka tao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera. Nianatra izany aho tatỳ aoriana Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia dia nanadihady ihany koa ireo tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao izay mampiseho ny fahatongavan'ny nofo ho nofo, na dia nampiasa ny teny hoe "tranga misy daty tsy fanao, ”Manondro fa ny fotoana nifandimbiasana dia nifandona ara-potoana.
Raha nianatra an'io zava-niseho io aho, dia nanontany tena aho hoe mety ho voazarazara ve aho. Tao anatin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, izay nitranga tao 2004 na 2005, nanontany aho Ahtun Re, mpitari-dalana amin'ny fanahy notarihin'i Kevin, ity fanontaniana ity. Nanomboka niara-niasa tamin'i Kevin tao amin'ny 2001 aho ary tamin'ny fotoana, Ahtun dia nampiseho tamiko ny fahafahana mamantatra ny fiainana efa lasa taloha na ny famantarana ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao.
Nilaza i Ahtun Re fa nisy fisarahana tao India izay nandray anjara tamin'ny famerenana amin'ny fiainana taloha. Tamin'io fotoana io, nikasa ny hanatrika ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny fitsaboana ny regression aho, izay hotontosaina any New Delhi, India ao amin'ny 2006. Nanontany an'i Ahtun aho aho raha afaka nihaona tamin'ny sehatra aho tamin'ity fihaonambe ity ary nilaza izy fa hanao izany. Rehefa nahazo ny fandaharan'asa ho an'ny New Delhi aho dia nahita sarin'i Yuvraj ary mifototra amin'ny fitoviana amin'ny endriky ny endrika, nanontany tena aho raha toa ka nisaraka tamiko izy.
Tao New Delhi, Yuvraj sy Neeta dia nanatrika ny famelabelarako ary taorian'izay dia nitady azy ireo aho. Nanazava tamin'izy ireo ny hevitro aho fa mety hisaraka i Yuvraj. Dia gaga izy ireo avy amin'ireto fampahalalana manaraka ireto.
Yuvraj sy Neeta Kapadia dia mahazo fitarihana ara-panahy hanatrehana ny fampisehoana nataon'i Walter momba ny fikarohana momba ny vatana vaovao
Nolazain'izy ireo tamiko fa mihazakazaka ny foibem-pandrenesana sy ny hipnotisma ao Mumbai izy ireo ary hianatra betsaka araka izay azo atao any amin'ny Kongresy, dia nandeha an-tsehatra izy ireo tamin'ny sehatra samihafa nomena tamin'ny fotoana nanaovany ny fampahalalam-baovao taorian'izay. Yuvraj sy Neeta dia nanafatra iray ihany. Nanapa-kevitra izy ireo hanatrika ny famelabelarako satria nanam-pahaizana izy ireo fa hiara-hiasa amiko amin'ny ho avy. Nolazain'izy ireo fa raha nihaino ny famelabelarako izy ireo, izay nahitana adihevitra momba ny fisarahana tamin'ny fomba ofisialy, dia naneho ny heviny i Neeta mikasika ny ohatr'i Yuvraj sy izaho.
Fiverenan'ny fihaviana, velona amin'ny fiainana an-davan'andro, fanahy roa na zana-kisoa roa: lalana mihodinkodina eo amin'ny toerana mifanohitra an'izao tontolo izao
Nianatra aho fa nandeha tany amin'ny Oniversiten'i Mumbai i Yuvraj, izay nahazoany medaly volamena tamin'ny microbiology, izay nomena ny mpianatra ambony. Nianatra momba ny biôlôjia koa aho ary nahavita fianarana tsara. Yuvraj tatỳ aoriana dia nanova ny asany ary nanokana ny fiainany ho amin'ny fiverenan'ny vatana vaovao indray ary ny famerenana indray ny fiainana. Tahaka izany koa, na dia mbola nanohy nampihatra fanafody aza aho, dia ny porofo mibaribary momba ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana vaovao indray dia ny porofo mivaingana momba ny fiverenan'ny vatana vaovao ary nanefa fe-potoana anankiroa aho tao amin'ny biraon'ny talen'ny IARRT, fikambanana iray voarindra monina any Etazonia. Raha oharina, na dia teraka amin'ny lafiny mifanohitra aza ilay planeta, dia nanaraka lalana mitovy amin'izany izahay.
Rehefa nampahafantariko an'i Yuvraj fa noheveriko fa izy angamba no nisaraka tamiko, niato kely izy nandritra ny segondra vitsy, nijery ahy ary nilaza hoe, "Fantatro fa marina izany." Nanazava i Yuvraj fa tamin'io fotoana io dia nahazo fanamafisana anaty sy intuitive izy fa izaho no nisaraka. Rehefa niverina tany Etazonia aho, tao amin'ny fivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanamafy koa i Ahtun Re fa i Yuvraj Kapadia no nisaraka tamiko.
Tao amin'ny Kongresy Iraisam-pirenena momba ny fitsaboana ny regression natao tany Torkia tamin'ny 2011, nanambara i Yuvraj sy niresaka momba ny raharaha momba ny fanangonana an'i Yuvraj Kapadia | Walter Semkiw.
Ao amin'ny fampitahana sary azo omena eto amin'ity pejy ity, i Yuvraj dia naseho teo amin'ny ankavia, teo amin'ny ankavanana aho ary tao afovoan-tanàna, nisy fanoloran-tena efa natolotra antsika teo am-piandohan'ny revolisiona amerikana.
Tamin'ny fahitana voalohany, Walter Mihevitra fa ny sarin'i Yuvraj Kapadia dia ny sarin'i Walter
Tantara iray mahatsikaiky iray hafa koa fa taona vitsy taty aoriana dia tao amin'ny fivorian'ny birao IARRT tany San Diego aho ary nandeha tamin'ny sarin'ny vondrona iray izay noheveriko fa nampiditra ahy niaraka tamin'ny mpiara-miasa maromaro avy any India. Rehefa lasa aho dia nieritreritra anakampo hoe: “Tsy tadidiko ny naka an'io sary io.” Nihodina aho ary nandinika akaiky kokoa ny sary ary nahatsapa fa Yuvraj io amin'ny sary fa tsy izaho.
Raha raisina ity tranga ity, dia asehony ny fomba ahafahan'ny fanahy tsara kokoa hanatratra tanjona voafidy amin'ny fampidirana amin'ny toerana samihafa amin'ny fotoana iray. Yuvraj sy izaho dia samy mampiroborobo ny fahatakarana tsaratsara kokoa momba ny fiverenan'ny vatana vaovao any amin'ireo demokrasia roa lehibe eto amin'izao tontolo izao, India sy Etazonia. Na dia mampirisika ny fotopampianarana momba ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao aza ny fivavahana lehibe any India, Hindoisma, dia nampidirina tany India hatramin'ny taona 2000 ihany ny famerenana ny fiainana.
Sunny Satin, Blossom Furtado & Fiverenana amin'ny fiainana taloha tany India
Ny sariitatra Sunny Satin, izay sary an-kavanana, izay niaina tany Southern Kalifornia, dia nanampy tamin'ny famerenana fitetezam-paritra tany Inde. Sunny dia nanorina ny Institiota Hypnosis any New Delhi. Sunny dia nikarakara ny Kongresy Iraisam-pirenena ho an'ny fitsaboana Regression any New Delhi ary izy no nanamora ny famoahana ny bokiko, ateraka indray, ao India. Nifankahita izahay sy i Sunny tao amin'ny CNN-IBN tao amin'ny 2006.
Fikambanana iray efa nisy fialan-tsasatra taloha tany Inde, any New Delhi, dia ny Sekoly Hypnotherapy ao India, izay tarihan'i Blossom Furtado, mpisava lalana iray hafa tamin'ny famerenana indray ny fiainana tany Inde. Ny Rock Furtado vadiny dia namoaka ny dikan-teny voalohany ateraka indray ao India.
Drs. Newton sy Lakshmi Kondaveti, ny Akademia Fikarohana Fiainana ary ny famerenana indray ny fiainana any India
Mpivady hafa izay nampandraisina ny fampiroboroboana ny famerenana indray ny fiainana any India dia ny Dr. Newton Kondaveti sy ny vadiny, Dr. Lakshmi Kondaveti. Ny Newton sy Lakshmi dia samy efa nampiofanina ho dokotera, saingy nanokana ny fiainany izy ireo tamin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fandrosoana ara-panahy. Izy ireo no namorona ny Life Research Academy (LRA) ao Hyperabad, India.
Ny famerenana amin'ny fiainana an-taonany dia manana fahafahana hanasitrana ny olona, ​​fa porofo manamarina ny vatana vaovao indray, izay manaporofo izany Ny fanahy iray dia afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena ary ny fiombonana ara-poko avy amin'ny fiainana mandra-pahafaty, dia afaka manasitrana ny fiaraha-monina mba hamoronana tontolo milamina kokoa.
Yuvraj Kapadia sy ny Fondation EKAA
Yuvraj no miasa izao EKAA Foundation, izay natokana amin'ny famolavolana sy fampiroboroboana ny famerenana amin'ny fiainana, ny fitsaboana hypnotherapy ary ny fivoarana ara-panahy.
Fihetseham-batana ara-pahasalamana ao amin'ny sakaizan'ny fihazana: Yuvraj sy izaho manana tarehin-javatra toy izany.
Talenta sy tombotsoa mitovy amin'izany: Yuvraj sy izaho dia samy niasa tany amin'ny biôlôjia ary samy nahazo mari-pahaizana. Nandritra ny fiainam-piainana izahay dia nampitombo ny herinay tamin'ny fikarohana momba ny vatana vaovao sy ny famerenana indray ny fiainana.
Famaritana eo amin'ny sehatra nasionaly sy fiaraha-monina: Okrainiana ny fiaviko foko, na dia teraka tany Chicago aza aho ary olom-pirenena Amerikana, ary i Yuvraj dia teratany India.
Ny fihenam-bidy: Yuvraj ary mino aho fa avy amin'ny fanahy iray ihany isika.